Tapglue: Fitaovana azo ovaina hamadika ny vokatrao amin'ny tambajotra sosialy. | Martech Zone
Sabotsy, Oktobra 17, 2015 Talata, Aogositra 18, 2020 Douglas Karr
Tapglue dia ahafahanao manisy sosona sosialy ao amin'ny app anao ao anatin'ny ora maromaro, ahafahanao mifantoka amin'ny famoronana traikefa mpampiasa mahafinaritra sy mampitombo ny fiarahamonina misy anao.
Miaraka amin'ny sosona sosialy Tapglue sy ny plug-tsinay ary milalaova ny sakafom-baovao, azonao atao ny mampiasa ny herin'ny tambajotra mifandray, mamela ny mpampiasa hamorona piraofilina manokana, hifandray amin'ireo namany, ary hampiroborobo ny fifampiraharahana faran'izay betsaka.
Ahitana: TapGlue Features:
News feed - Manamboara fahana vaovao ara-tsosialy izay mitazona ny fitazonana, ny firosoana ary ny fanamorana azy. Mamorona traikefa velona manodidina ny atiny misy sy ny asan'ny mpampiasa anao. Ireo tiana, hevitra ary fizarana namboarina dia hiantoka ny fanaparitahana ny atin'ny mpampiasa anao sy ny mpampiasa anao. Asehoy ny lahatsoratry ny mpampiasa, ny hetsika, ny sary ary maro hafa hamoronana fomba vaovao hampiarahana ny mpampiasa anao.
Profile'ny mpampiasa - Mamorona vondrom-piarahamonina amin'ny alàlan'ny fampidirana ny piraofilin'ny mpampiasa amin'ny vokatrao. Avelao ny mpampiasa hanampy sy hanova sary na hifandrindra amin'ny Facebook. Manampia karazana fampahalalana momba ny mombamomba ny mpampiasa sy ny safidinao. Asehoy ny isan'ny mpanaraka anao na ny namanao. Asehoy ireo fahana sy fandaharam-potoana miorina amin'ny mpampiasa. Avelao ny mpampiasa hamorona tsoratadidy, lisitra firaketana, lisitry ny lisitra ary lisitra maro hafa.
Notifications - Tazomy ny mpampiasa mba hamoaka ny zava-mitranga ao amin'ny tambajotrany. Farito ny zava-nitranga sy ny fampandrenesana tianao haseho - na inona na inona itovizany, manova sarina piraofilina na mahazo mpanaraka vaovao. Asehoy ny takelaka tsy voavaky anaty fampiharana na amin'ny efijery an-tranonkalan'ny mpampiasa hampiatrarana ny hetsiky ny fiarahamonina misy anao ary hampiato ny fitazonana azy amin'ny fomba tena mifanaraka.
Mpinamana sy mpanaraka - Mamorona tambajotra misokatra na tsy miankina hamoronana sary sosialy mahery manodidina ny vokatrao. Safidio ny namana na ny maodely mpanaraka ho an'ny tamba-jotra. Manararaotra Facebook, Twitter na ny adiresy ho an'ny Find Friends. Avelao ny mpampiasa hitady ny hafa hahita ny olona azon'izy ireo mifandray.
Tapglue dia ao amin'ny Upland Localytic izao
Tags: fahana hetsikafahana hetsika ara-tsosialyfahana ara-tsosialylakaolytapglue apisakafo tapgluetapglue sdktapglue activité api